University In Diversity »Oniversite Hodges
Ny Anjerimanontolon'i Hodges no mitarika ny fahasamihafana amin'ny fampianarana ambony
Ny fahasamihafana dia fomba fiainana any Hodges, izay misy ny filozofia amin'ny fahasamihafana. Ny anjerimanontolo dia nohamafisina sy omena alalàn'ny vondrom-piarahamoninay mpianatra, mpampianatra ary mpiasa marobe izay mitondra fiteny sy fomba fijery marobe amin'ny ezaka ataontsika. Izahay dia manaja sy manome lanja ny lanjan'ny olona avy amin'ny firazanana, fiaviana, fiaviana, taona, lahy sy ny vavy, fironana ara-pananahana, fahasembanana, toe-karena na antitra, ary fomba fijery hafa sy fahasamihafana isan-karazany, ary manome lanja ny fahasamihafan'ny eritreritra izahay. Izahay dia manolo-tena amin'ny fandeferana, ny fahatsapana, ny fahatakarana ary ny fifanajana na aiza na aiza ao anatin'ny vondrom-piarahamoninay, ary manamafy ny fampanantenanay izahay fa hanome toerana fandraisana olona iray.
Ny Oniversiten'i Hodges dia notendren'ny Institute for Diversity Certification ho mpitarika Diversity and Inclusion.
# 3 Fampianarana oniversite azo antoka indrindra eto Florida
Nomena anarana ao amin'ny Colleges Divers Most Niche any Florida
Vonona ny hampihatra aho izao!
Hizaha ny programa
Fahasamihafana eo amin'ny fiainana
Nahoana no zava-dehibe ny fahasamihafana any amin'ny oniversite?
Ny tsirairay amintsika dia tonga amin'ny anjerimanontolo na oniversite voafidintsika miaraka amin'ny zavatra niainantsika manokana izay mamolavola ny fomba fahitantsika an'izao tontolo izao. Rehefa manomboka mihaona amin'ireo olona vaovao ao anatin'ny isan'ny mpianatra mpiara-mianatra sy manao fampianarana miaraka amin'izy ireo izahay dia manomboka mahita fa ny zavatra niainantsika dia izany fotsiny - ny zavatra niainantsika.
Amin'ny saina tsy miangatra dia fantatsika fa ny zavatra niainan'ny hafa dia mitondra fomba fijery vaovao tanteraka amin'ny fahitantsika sy ny fomba fahitantsika an'izao tontolo izao. Ny fisokafan'ny saintsika hahalalana ny fampidirana, firazanana, foko ary fahasamihafana eo amin'ny lahy sy ny vavy, ny toerana misy ny veterana, ny fahasamihafana ara-pinoana, ny taonany ary ny toekarena dia mahatonga antsika ho olona salama kokoa. Rehefa mivoaka amin'ny sehatry ny asa miaraka amin'ity fomba fijery vaovao ity ianao dia hanatsara ny fifaninanana ara-toekarena any Amerika.
Ny Hodges University dia mifantoka amin'ny fananganana tetezana ho an'ny vondrom-piarahamonina lehibe kokoa ary ny fiaraha-miasa amin'ireo vondrona hitondra fifantohana misimisy kokoa sy misongadina kokoa amin'ny traikefa amin'ny fahasamihafana sy ny hatsaran'ny fampidirana amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasan'ny fiaraha-monina. Raha miresaka an'ity fifantohana ity i Hodges, dia manome tetiandro ho an'ny hetsika isan-karazany ho an'ny mpianatra eny amin'ny oniversite sy ny mpikambana ao amin'ny fiarahamonina. Miezaha hahafantatra izay mampiavaka antsika tsirairay sy tsy manam-paharoa, jereo ny kolontsaina marobe am-perinasa, ary ianao dia hitombo ho olona iray manaiky ny fahasamihafan'ny hafa. Io fomba fijery vaovao io dia hahafahanao manamafy ny fahalalanao ny hafa any am-piasana.
Ahoana no fandraisan'i Hodges U ny fahasamihafana?
Hodges U dia mandray ny fahasamihafana amin'ny fomba marobe.
Ahoana? Amin'ny alàlan'ny fiatrehana ireo fanamby miaraka amin'ny demografika miova, ny fomba fijery tsy mitovy ary ny fahamendrehana any am-piasana. Hodges dia miatrika ireo fanamby ireo amin'ny fifantohana amin'ny fampidirana, ny fahaizan'ny kolontsaina ary ny fitoviana. Amin'izany fomba izany, ny Oniversite dia miasa mba hamoronana kolontsaina manankarena sy mahavokatra amin'ny alàlan'ny vatan'ny mpianatra isan-karazany. Ity fahasamihafana ity dia manampy ny mpianatra hahatsapa ny heriny ary afaka mitondra ny tenany manontolo hianatra sy hitombo.
Fa maninona no tokony horaisinao ny fahasamihafana?
Raha mikasa ny hiasa amin'ny anjara asa fanaraha-maso ianao, na koa amin'ny ekipa iray, dia zava-dehibe ho anao ny mandray tontolo iray misy ny fahasamihafana ho an'ny fahombiazanao. Hodges dia nahalala fa ny mpanara-maso ankehitriny dia tsy maintsy manana fahaiza-manao kolotsaina sy isan-taranaka, ary ireo fahaiza-manao ireo ihany koa dia mamela anao ho mpikambana mahomby amin'ny ekipa. Takiana aminao ihany koa ny andraikitrao amin'ny famokarana faran'izay betsaka sy ny fampidirana azy rehetra amin'ny ankamaroan'ny toeram-piasana.
Ity ilanao ity dia ny ahafahanao miasa amin'ireo ekipa misy kolontsaina sy iraisan'ny maro taona no hery manosika ny fanoloran-tenan'i Hodges hamorona tontolo samihafa. Ny zavatra rehetra ataontsika dia mifototra amin'ny famoronana tontolo iainana hahombiazan'ny mpianatsika, ary ny safidintsika hanome ny toetrandro fianaràna hafa dia porofon'ny fanolorantenanay ny lalan'ny fahombiazanao.
Ny oniversite Hodges dia miarahaba ireo mpianatra amin'ny firazanana rehetra, fiaviana, fiaviana, lahy na samy vavy, fivavahana, fironana ara-pananahana, kilemaina, toe-karena na veterana, ary fomba fijery samihafa sy fahasamihafana misy eo amin'ny tsirairay. Manentana ny mpianatra tsirairay izahay hiteny sy hampianatra ny hafa momba ny zavatra niainany isan-karazany mba hamoronana tontolon'ny fahalalana feno fahalalana ho an'ny rehetra.
Manolo-tena izahay amin'ny famoronana campus isan-karazany mba hahitan'ny mpianatra rehetra fahombiazana. Ireto ambany ireto ny statistikan'ny Hodges University.
Fisoratana anarana ho an'ny miralenta
Fisoratana anarana firazanana sy foko
American American: 12%
Fotsy, tsy Hispanika: 38%
Hafa, mifangaro, na tsy fantatra: 6%
Ny mpianatra vitsy an'isa ankapobeny sy ny tahan'ny fahasamihafana ara-poko ho an'ny Hodges University dia 62%. Ity fanavahana ity dia mahatonga antsika ho iray amin'ireo orinasam-pampianarana ambony isan-karazany any Florida. Nomena anarana ho andrim-panjakana manompo Hispanika ambony koa izahay. Ny fahatongavana ho anjerimanontolo maro karazana indrindra eto Florida dia fanamby raisinay, satria amin'ny fikatsahana hanolotra fanabeazana isan-karazany ho an'ny mpianatra - dia mitady hamorona tontolo tsaratsara kokoa ho antsika rehetra isika.
Mifandraisa amin'i Hodges U Momba ny fahasamihafana
Raisinay ny fanontanianao momba ny fahasamihafana sy ny fampidirana na amin'ny campus na ao amin'ny fiarahamonina. Azafady mba mifandraisa aminay:
Biraon'ny fahasamihafana, fampidirana ary fahaiza-manao ara-kolontsaina
4501 Boulevard zanatany, tranobe H